Okunye simulators moya
Flight Gear intsabo Simulator
malunga FlightGear (Akukho izihloko)
FlightGear moya Simulator le ivulekileyo-umthombo, Simulator freeware kuphuhliswa yi-Project FlightGear. Ukukhululwa yokuqala waba 1997, kwaye okwangoku kukho ezininzi kukhupho.
Nangona freeware, FGFS yeyona Simulator entle kakhulu kwaye olusengqiqweni. Kunye Simulator ngayo ukuzeyisa, yonke enye into enxulumene ukuba isimahla ke ukulayishela phantsi, ukusebenzisa nokuphuhlisa ngakumbi. Ukulayisha okanye ukuba ufuna ukufunda okungakumbi ngalo, unako ukuyenza le web site FlightGear ezisemthethweni, Www.flightgear.org .
Indawo ephambili ukulayishela moya ezahlukeneyo, ngaphezu 400 kubo, na apha: Github.com/FGMEMBERS .
into entle ngayo kukuba awunalo ukubhalisa ukukhuphela moya ofuna.
Imbonakalo anokukotshwa ngeendlela ezimbini, kwisiza web okanye ngokusebenzisa inkqubo TerraSync ngaphakathi Simulator. Kwakhona, kuxhomekeke amandla PC yakho, ungakhetha phakathi engagqibekanga kwanobuhle HD.
Kwakhona FlightGear unalo womnatha sayo baninzi, kodwa ngelishwa akukho moya esebenzayo idesktop, kwaye akubangakho nenkxaso lothungelwano mp wawumkhulu VATSIM okanye IVAO.
Ixesha ukwenza page: 0.108 imizuzwana